China Lipgloss umthengisi isiko lip isilungiseleli seglosi yabucala diy creamy lipgloss mveliso kunye nabathengisi | Ubuhle beIris
Umthengisi weLipgloss ngumlomo osisidlabhuli oyileyibhile ye-diy e-creamy lipgloss
I-Vegan kunye nenkohlakalo yasimahla yomlomo ongagudiyo, egudileyo kwaye eqaqambileyo. Umlomo uyanyibilikisa iivithamini kunye nebhotolo yeShea.
Imilomo yethu emenyezelayo yiVegan kunye neNkohlakalo yasimahla, ineSoft texture, engancangathi emilebeni, efumileyo kwaye ikhazimla.
Le gloss yomlomo ityebile kwi-Vitamin E yendalo, ekhusela ngokufanelekileyo imilebe, yenza ifilimu yokukhusela imilebe ethambileyo, ethintela ukulahleka kokufuma, inciphisa imigca emihle kunye nemilebe eyomileyo kunye nokuxobuka. Buyisela isicwebezelisi semilebe, yenze imilebe ithambe kwaye igude, kwaye uzive ugcwele ukufuma.
Ilungele ukuhlangana kosapho okanye kwabahlobo, imiboniso yefashoni, ukusetyenziswa kwemihla ngemihla njalo njalo. Ubungakanani obuphathekayo buvumela ukuba uyihombise imilebe yakho nanini na, naphi na. Imibala engama-65 eyahlukeneyo enokudityaniswa ngokulula kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhombisa, amatyeli kunye neetoni zolusu.
Igama lomxholo Iglosi yomlomo
5.Iqukethe iivithamini / ibhotolo yeShea
MOQ Iikhompyuter ezingama-3000
2Q: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
A: okokuqala, masazise imfuno yakho ngokubhekisele kwizinto, emva koko siya kunika ingcebiso ngokufanelekileyo kwaye sinike iikowuteshini, iyonke sinemibala engama-65 yomlomo wethu. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekise ukuba zingathumela iisampulu. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba i-odolo ibekiwe.
3Q: Ngaba uyayamkela i-OEM I-ODM Kwaye ngaba ungenza uyilo kuthi?
4Q: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
5Q: Kuthiwani ngexesha lokukhokelela kwimveliso yobuninzi?
6Q: Athini amagama akho okuhlawula?
7.Q: Uqhagamshelana njani nathi?
Singathanda ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye ingxelo onayo!
Egqithileyo I-lipgloss e-glossy shiny lipgloss ethengisa i-wholesale akukho ilebheli yabucala ye-lipgloss pigment
Okulandelayo: I-lip yomlomo ohamba grey eyilebheli yabucala ngokhanyiso lwe-glossy lipgloss vegan kunye nenkohlakalo yasimahla ye-lip glosses
Umenzi we-gloss lip
Isiko lomthengisi we lipgloss
lipgloss Ihowuliseyili akukho ileyibheli yabucala
ileyibhile yabucala yomlomo
i-lip gloss yomlomo
ileyibheli yomlomo omenyezelayo yabucala
Ihowuliseyili lipgloss siko logo sombala lip glos ...
Umlomo isilungiseleli seglosi yabucala imilebe iplumper glos ...
Zibambe umlomo isilungiseleli seglosi zabucala siko unganxwebu ...
Imithambo ecwebezelayo yelipgloss eqaqambileyo yelipgloss yeelebhu akukho ...
Ecacileyo lip isilungiseleli seglosi yabucala lehoseyile ecacileyo l ...
siko imilebe isilungiseleli sangasese yabucala bezinto imilebe glos ...